ICG: Shabaab uga dayda "xalinta" khilaafaadka - BBC Somali
ICG: Shabaab uga dayda "xalinta" khilaafaadka
27 Juunyo 2014
Image caption Kooxda xasaradaha dunida ayaa dowladda ugu baaqday inay xallintda khilaafaadka uga dayato Al-Shabaab
Kooxda xasaradaha dunida ee ICG ayaa sheegtay inay adagtahay in laga guulaysto ururka Al-Shabaab ee Soomaaliya haddi aysan dowladdu baddelin hanaankeeda.
Warbixintan oo ah tii ugu horreysay ee caalami ah oo sawir wanaagsan ka bixiso Al-Shabaab, ayaa waxay ugu baaqeysa dowladda iyo dhinacyada kale ee ku howlan dagaalka Soomaaliya inay Al-Shabaab uga daydaan arrimaha la xirira xallinta khilaafaadka, siiba kuwa ku dhisan qabyaaladda.
Warbixinta waxay ku baaqeysaa in dowladda Soomaaliya ay dib u heshiisiin ka billawdo dhulka ay haatan gacanta ku hayso, ka hor inta aysan qaadin duullaan hor leh oo lagu qabsanayo dhulka ay haatan ka taliyaan Al-Shabaab.
Al-Shabaab ayaa laga qabsaday inta badan magaalooyinka waaweyn ee dalka Soomaaliya, balse waxay weli gacanta ku hayaan dhul ballaaran oo ku yaalla bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya.
Ciidanka Al-Shabaab militeri ma lagu tilmaami karaa?
30 Disembar 2013
Weerarka AMISOM "waa mid ballaaran"
12 Maarso 2014
Uhuru Kenyatta: Shabaab nama soo weerarin
17 Juunyo 2014